Ungaphutheli! I-Semalt Ukwabelana ngeengcali 7 Iindidi ze-SEO Ubufakazi
I-SEO practice isaselula kwaye ikhula. Abacebisi baye bajonga imbono yokuba i-SEO yenzululwazi eyenza i-ingxoxo malunga ne-SEO ndlela isebenza ngayo kuzo zonke iimeko. Kukho ubungqina obuninzi bobugcisa kumlo kunye ne-SEO.
Ukuba i-SEO yenzululwazi, isayensi isenza njani? Inzululwazi incike kwisicatshulwa esisisiseko sokuthi iphela indalo ilandelelanisa imigaqo enokumiselwa ngokuqwalasela nokuhlola ngaphambi kokuba iphimbo livavanywe. Kwakhona kucinga ukuba le mithetho igxininiswa kuphela ngokukhawuleza nokuba kukho ukutshintsha kweeparadim - cloud9 import sql. Ihlabathi le-SEO lihlelwe kwaye lihlelekile kodwa imithetho okanye i-algorithms ye-SEO iyatshintsha phantse rhoqo. Naliphi na umzamo wokuthembela ekuboneni apha akuyi kubonelela ngeziphumo ezichanekileyo ngaphandle kokuba kwenziwe ngaphezu kwonyaka wekhalenda.
U-Nik Chaykovskiy, uMphathi oyiNtloko kuMphathi weMatriki we-12 (Semalt , uhlola iimpawu ezi-7 ze-SEO ubungqina kunye nokusebenza kwazo ekwenzeni i-SEO isayensi ekhulileyo kuquka:
1. Ubungqina Bobuprofeto
Oku kuvela kwiingcali ezibhala izilungiso okanye iikhowudi ezithembelelwe yi-SEO. Igalelo labo liyingqayizivele njengoko liyinyani, kwaye bahlala phantsi kwintaba ye-SEO njengabaprofeti beBhayibhile. Ngoko ke, kufuneka sibe nekhono lokudibanisa iingxelo zabo ezichanekileyo njengoko asinakuguqula iikhowudi ze-SEO ngokwethu. Kwiphepha eliphantsi, ubungqina obungokwesiprofeto abukho umdla kunye kwaye maxa wambi unokubonakala ubonakala.
2. Ubungqina bobunqunu
Olu bubungqina bobuqu bomntu siqu. Zonke iinzululwazi ziqala ngokuqwalasela kwaye i-SEO ikhokela utshintsho olwenziwe kwiwebhusayithi kwaye luhlalutya umphumo kwizikhundla. Olu bungqina lukho ngokubanzi kwaye ngoko kulula ukuqokelela njengento yokuqala yophi na uphando lwezesayensi kwi-SEO. Kwiphepha le-flip nangona kunjalo, amava omsebenzisi anganeliswa kumntu omnye kwenye, ngoko ke amava amaninzi akakwazi ukuxelela ibali elipheleleyo.
Zonke iinzululwazi zizama. Kwi-SEO, thina ngokucinga ukuba "ukongeza amagama angundoqo kwisitethi somxholo kuya kuphucula izikhundla", yenza utshintsho kwiwebhusayithi ukuvavanya iingcamango uze ulinganise umphumo. Ukuqulunqa nokuvavanya i-hypothesis kubangela ukuba kubangelwa iimeko eziqinisekisa ukuba inkqubo iqinisekisa. Iimvavanyo kufuneka zilawulwe kusenokuba ziphephe ukuphazamisa isiseko se-SEO.
4. Isilingo esiLawulayo
Kule ndlela yokusetha, amagama amaninzi ekarhulumente abhalisiwe kwaye iiwebhusayithi ezitsha zakhiwe ukusuka emhlabeni. Ngapha koko, iisayithi zakhiwe kwindawo ethile emva kokuba isayithi ngasinye sichaza utshintsho lwayo. Le ndlela iqinisekisa ukulawula iimvavanyo ngaphandle kokuyekethisa eminye imisebenzi. Nangona kunjalo, iisayithi ezidalwe kule ndawo zingabonakali ubunzima okanye ubunjalo be-SEO ngqo.
5. Ubungqina Besibili-Isandla
Kuzwakala ngathi ukuva, kodwa ngokwenene, onke amava kunye nokuvavanywa kwaqhutyelwa kwixesha elidlulileyo kwimithombo esemthethweni yobungqina. Ezinye iinkcukacha kwi-SEO ayifuni ukuqinisekiswa ngokuphinda ukuvavanya onke amaxesha. Kwiimeko ezinjalo, ubungqina bunikeza izigqibo ezichanekileyo zenkqubela phambili yesayensi.
6. Ububungqina obuBumbeneyo
Kwiisethi ezinkulu zeenkcukacha, kunzima ukuhlukanisa iziguquko okanye ukuzama. Endaweni, ukhangelelanisa imirhorensi phakathi kweeseti zeedatha. Oku kunceda ukutyhila ubudlelwane beemathematika, ngakumbi apho iinguqu ezininzi zichaphazela umphumo ofanayo. Nangona kunjalo, ulungelelwano aluyi kuqinisekisa ukuba i-causation .
7. Ukulinganisa okuKhulu
Iimodeli ze-SEO indalo zenziwe ukuhlola i-hypothesis kwinqanaba elikhulu. Ukuvavanya le mizekelo kunika izigqibo ezicacileyo ezikhokelela ekuphuculweni kweemodeli. Ukufumana ukulawula apha kunokwenzeka ngenxa yokuba luhlobo lwe-laboratory SEO. Sekunjalo, iziphumo zokumilisela zilungile nje njengemodeli esetyenziswayo.